I-GIM International Español, iyaqhubeka ngempumelelo elungileyo -Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Spanish GIM International, waqhubeka ngempumelelo
Ukukhishwa kwekota yokuqala ye2015 kuza kum, ngokuqinisekileyo umxholo obalulekileyo kwisiSpanish.
Izihloko zodwa zithi ixabiso abalisebenzisana nabo limele:
Ixesha elitsha ekulawuleni umhlaba uphuma. Le ngongoma enkulu apho uCrit Lemmen kunye nabanye oogxa bathathu bathetha malunga nendlela iinkqubo, izicelo kunye neendlela zehlabathi zikhokelela ekulawuleni amalungelo ngaphaya kwe-UML elula ye-ISO19152.
Ukubonelela umbala kwiqondo lokuma. USam Fleming, Iain Woodhouse kunye noAntoine Cottin bathetha malunga nendlela ukuqhutyelwa kweLidar kwiintlanga-mhlaba kutshintsha ngayo indlela esibona ngayo amafu.
¿Ngaba i-GIS ifile? UDavid Rhind uthetha ngelinye apho baqambe khona incwadi ephawulekayo, bacebisa isiphakamiso seNdawo yeeNdawo zoLwazi kunye neSayensi (GISS).
I-Ford kunye nobugcisa bokugcinwa kwimephu. Olu luhlalutyo oluhle kakhulu apho ukuthelekiswa kwendlela yeFord ekusebenzeni okungapheliyo kwetyala kwenziwa. Akukho nto ikude ukuba sijonga isixa semali esityalwe ekuqokeleleni ulwazi kunye neenkqubo zokufakwa kwikhompyuter ... kwaye kuncinci ekuhlaziyweni nasekubuyiseni iindleko.
Uphando ngumsebenzi omele ucinge ngawo ngaphambili. Ngethuba lokuqala ibhinqa lihlalo kwi-FIG, kwaye iGIM International ithatha ixesha lokubuza imibuzo ye-16 engathandabuzekiyo.
Ukuhlengahlengisa izinga leenkcukacha kwiimodeli ze-3D. Le ngqungquthela ephakathi kwentshukumo, ngokubhekiselele kwinkimbinkimbi yenkalo yeenkcukacha (LOD) ekusebenziseni imigangatho yee-3D zemizi yeliso.
Uhlalutyo lwe-deformation yesantya sokuvavanya. Le meko yokusebenzisa ii-Unonous Flight Units, ukubeka iliso kwiminyaka emibini kungekhona nje ukutshatyalaliswa kwedama, kodwa ubungqina bokuba la maqela alungele ukwenza iinkqubo ze-Geo-engineering.
Ukuhlanganiswa kolwazi lwegosati. Eli nqaku ngoJoseph Santizo shwa nkathela ngendlela ephosakeleyo ngendlela yokuziphendukela kwemvelo kwezobugcisa kwiimeko ze-geomatics, kwimeko ye-drones, uye waza kudala izixazululo ezintsha kunye nokuhlawulela kwakhona ukufuna ukuchaneka okukhulu.
Ukuvuyiswa kwethu kwiGeorresres, ngokugxininisa kule ncwadi echazwe kwimimandla yethu yaseSpeyin, kunye nezicelo ezikhoyo njengalezo esizibonayo kule nguqulelo.
Njengengcebiso, nangona igosa elikulo mshibanisi wolwimi lwesiSpanish, isitayela esithi "google translate" siphuculwe, nangona umgangatho wobhalo lobugcisa ungaphucula ekuchazeni umoya wokubhala kwangaphambili.